China Amoxicillin Injection 15% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
Injection ye-Amoxicillin 15%
I-Amoxycillin (njenge-trihydrate) 100 mg
I-Amoxycillin esebenza isikhathi eside i-penicillin ebanzi, e-semi-synthetic, esebenza ngokulwa namagciwane we-Gram-positive ne-Gram-negative. Ububanzi bomthelela buhlanganisa iStreptococci, hhayi iStaphylococci ekhiqiza ipenicillinase, iBacillus anthracis, iCorynebacterium spp., Clostridium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Moraxella spp., E. colioth , Fusiformis, Bordetella spp., Diplococci, Micrococci ne Sphaerophorus necrophorus. I-Amoxycillin inezinzuzo eziningi; ayinabuthi, ine-resorption enhle yamathumbu, izinzile ezimweni ze-asidi futhi ibulala amagciwane. Umuthi ubhujiswa isb. I-penicillinase-Production staphylococci kanye nezinye izinhlobo ze-Gram-negative.
I-Amoxycillin 15% LA Inj. isebenza kahle ekulweni nezifo zomgudu wokudla, umgudu wokuphefumula, umgudu we-urogenital, i-coli-mastitis kanye nokutheleleka kwesibili kwamagciwane ngesikhathi sesifo segciwane kumahhashi, izinkomo, izingulube, izimvu, izimbuzi, izinja namakati.
Unganikeli izingane ezisanda kuzalwa, imifino encane (efana nezingulube zeginea, onogwaja), izilwane ezine-hypersensitivity to penicillins, i-renal dysfunctions, izifo ezibangelwa amagciwane akhiqiza i-penicillinase.
Umjovo we-intramuscular ungadala ukusabela kobuhlungu. Ukusabela kwe-hypersensitivity kungenzeka, isb ukushaqeka kwe-anaphylactic.
Ukungahambelani Nezinye Izidakamizwa
I-Amoxycillin ayihambelani nezidakamizwa ezisebenza ngokushesha ze-bacteriostatic antimicrobial (isb., Chloramphenicol, tetracyclines, kanye ne-sulphonamides).
Ngomjovo we-intramuscular. Shake kahle ngaphambi kokusetshenziswa.
Umthamo ojwayelekile: 1 ml nge-15 kg bodyweight ngayinye.
Lesi silinganiso singaphindwa ngemuva kwamahora angama-48 uma kudingeka.
Akufanele kube nokujova okungaphezu kwama-20 ml esizeni esisodwa.
Inyama: izinsuku eziyi-14
Ubisi: izinsuku ezintathu
Gcina endaweni eyomile, emnyama phakathi kuka-15 ° C no-25 ° C.
Gcina umuthi kude nezingane.
Langaphambilini I-Vitamin E ne-Selenium Oral Solution 10% + 0.05%
Olandelayo: Injection ye-Atropine 1%
Inaliti ye-Sulfadimidine ne-TMP 40% + 8%
Inaliti ye-Closantel Sodium 10%
Injection ye-Enrofloxacin 10%
I-Specinomycin ne-Lincomycin Injection 10% + 5%